Nke a bụ otú smartwatch ọhụrụ si Emporio Armani si ele anya | Akụkọ akụrụngwa
Nke a bụ otu smartwatch ọhụrụ si Emporio Armani dị
Armlọ ọrụ Armani bụ mgbe niile jikọtara ya na ejiji, ma n'oge na-adịbeghị anya, na n'ihi ịrị elu nke smartwatches, ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịmịnye onwe ya n'ụzọ zuru ezu n'ahịa a iji gboo mkpa nke ndị ahịa ya. Companylọ ọrụ ahụ gosipụtara ọhụrụ smartwatches abụọ iji gboo mkpa nke ndị ọrụ na-achọ ọ bụghị naanị maka ngwaọrụ bara uru na nke bara uru, kamakwa iji mara mma.
Companylọ ọrụ ahụ, dịka a tụrụ anya ya, adaberela na Wear OS, dị ka sistemụ arụmọrụ iji jikwaa ngwaọrụ ahụ, ọ dakọtara na iOS na gam akporo, ọ bụ ezie na usoro sistemụ ikpeazụ ị nwere ike nweta ọtụtụ ihe na ya ọ na-eguzogide mmiri nwere ike iguzogide 3 ATM nke nrụgide.
N'ime Emporio Armani Jikọtara ọhụrụ, anyị na-ahụ ihe nhazi ahụ Qualcomm si Snapdragon, a processor mere maka naanị maka wearables jisiri site gam akporo eyi tupu, ugbu a eyi uwe OS. Ihe omuma ohuru a adabaghi ​​na egwuregwu, dika odi na ufodu ndi ozo, ebe obu ihe jikotara ihe mmetuta obi nke anyi ji ejikwa ya na eme egwuregwu oge niile.
Ọzọkwa, jikọtara GPS, ka anyị nwee ike ịpụ gaa egwuregwu n'emeghị ka anyị n'ekwentị anyị oge niile iji mara ihe ụzọ anyị gara n'oge njem anyị. Ọ na-ejikọkwa mgbawa NFC, nke anyị nwere ike ịzụta site na Google Pay, nke dị mma maka mgbe anyị na-agba ọsọ ma achọghị ịnara ego.
Na-achịkwa Wear OS, Onye enyemaka Google nọ ebe niile na ekwentị, yabụ anyị nwere ike ịmekọrịta ya ozugbo na-enweghị iwepụta ekwentị anyị n’akpa anyị. Igwe ihuenyo jikọrọ Emporio Armani bụ ụdị AMOLED nke 1,19-anụ ọhịa. Companylọ ọrụ ahụ na-etinye anyị usoro nke mgbanwe ndị nwere ike ịgbanwe iji hazie ngwaọrụ ahụ ma ọ dịlarị site na webụsaịtị nke ndị nrụpụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Nke a bụ otu smartwatch ọhụrụ si Emporio Armani dị
"Mechie mgbanaka gị" bụ mkpọsa mgbasa ozi Apple Watch